Template 88 pejy hamoronana tohiny tonga lafatra | Avy amin'ny mac aho
Template 88 pejy hamoronana resume mety tsara
Rehefa mamorona antontan-taratasy avy hatrany am-boalohany, dia azo inoana fa raha tsy dia tiantsika loatra ny famolavolana, dia handany antsika ny tahotra raha manomboka manoratra teny tokana. Soa ihany fa afaka mampiasa modely isika hanombohana hahafantatra izay ilaintsika. Ny môdely dia mamela antsika hanova ny lafiny rehetra amin'ny antontan-taratasy iray, hanaingo azy ireo ho toy ny antsika. Na dia Microsoft Word no fampiharana tsara indrindra hita eny an-tsena Ary ahafahantsika mamorona karazan-tahiry rehetra, Apple Pages dia tena safidy hafa koa, indrindra fa maimaim-poana tanteraka ho an'ireo mpampiasa rehetra manana ID Apple.
Raha ny fanaovana resa indray, ary lazain'ny olona iray izay nahita olona maro nandritra ny androm-piainany ho an'ny asako, dia tsy maintsy tadidina fa ny fanomezana ny mombamomba indrindra amin'ny toerana kely indrindra, fampahalalana manan-danja, noho izany raha vantany vao mandeha amin'ny tafatafa momba ny asa isika afaka manitatra ny angona mifandraika amin'ny fahalalantsika sy ny asa teo aloha izahay. Ho fanampin'izay, ny hatsarany dia tsy maintsy manintona ampy hahafahana miditra amin'ny fomba haingana ny fampahalalana rehetra nefa tsy mila mandany fotoana be loatra amin'izany.
Resume Mate - Ny modely famolavolana ho an'ny pejy dia vahaolana tonga lafatra amin'ny filàn'ny famoronana resume tonga lafatra. Ity rindranasa ity dia manolotra anay maodely miisa 88 isan-karazany kalitao, maodely izay azonay ampanjifaina amin'ny lafiny rehetra hifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa rehetra. Resume Mate - Ny modely famolavolana ho an'ny pejy dia misy vidiny mahazatra 4,99 euro, saingy mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana. Mitaky macOS 10.10 na taty aoriana ary mpanodina 64-bit. Ny habaka takiana amin'ny fametrahana ity fampiharana ity dia 180 MB ary azontsika atao ny misintona azy amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Template 88 pejy hamoronana resume mety tsara
Nesorina izy ireo, misy fomba hahazoana azy ireo izao? Misaotra indrindra anao
Valiny tamin'i Nicolas
AudioNotes dia rindranasa vaovao handraisana feo am-peo amin'ny Mac
Raha mametraka kapila SSD amin'ny Mac aho, mila manamboatra TRIM ve aho?